Kulamadii Sabtida ee England Premier League - BBC Somali
Kulamadii Sabtida ee England Premier League
18 Sebtembar 2010
Image caption Weeraryahanka kooxda Aston Villa
Kooxaha Aston Villa iyo Bolton, waxay ku kala baxeen 1-1.
Goolka waxaa ku hormaray kooxda Aston Villa, oo marti loo ahaa.
Daqiiqadii 13-aad ayaa ciyaaryahanka Ashley Young uu u dhaliyay.
Hase yeeshee daqiiqadii 35-aad, oo ah dhowr iyo labaatan daqiiqo kadib goolkii Aston Villa, ayaa goolka barbardhaca waxaa Aston Villa u dhaliyay Kevin Davies.
Aston Villa oo horay lix dhibcood u lahayd, waxay yeelanaysaa 7, halka kooxda Bolton oo tagayso 6 dhibcood maadaama ay horay u lahayd 5 dhibcood.
Ciyaaraha kale, Blackburn iyo Fulham 1-1 ayay ku kala baxeen, Eventon waxaa gurigeeda 0-1 kaga badiyay, Stoke iyo West Ham 1-1 ayay ku kala baxeen, Tottenham 3-1 waxay kaga badisay Wolves, West Brom waxay iyaduna 3-1 ayay Birmingham uga adkaatay.
Chelsea ayaa 12 dhibcaha ku hogaaminaysa, iyadoo 4 kulan yeelatay, Arsenal oo goor dhow ciyaaraysa ayaa ku soo xigta oo leh 10 dhibcood, Manchester oo 4 kulan yeelatay 8 ayay leedahay Tottenham oo 5 kulan ciyaartay 8 dhibcood ayay leedahay. Newcastle, Fulham, Blackpool, Aston Villa, West Brom dhamaan waxay leeyihiin min 7 dhibcood. Birmingham iyo Bolton waxay wada leeyihiin min 6 dhbcood.
West Ham, iyadaa ugu hoosaysa oo shan kulan oo ay ciyaartay waxay ka heshay 1 dhibic, Evetonna laba dhibic ayay heshay, Wigan iyo Stoke min 4 dhibcood ayay leeyihiin.